HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Norvezianina Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | IZA NO TENA TAFITA AMIN’NY FIAINANA?
Tsy mampianatra mihitsy ny Baiboly hoe olona vitsy ihany no afaka ny ho tafita amin’ny fiainana. Tsy milaza koa anefa izy io hoe izay rehetra nofinofisinao dia ho tanteraka daholo, hoatran’ireny tantara amin’ny boky ireny. Izany matetika no asaina inoan’ny ankizy, nefa ho diso fanantenana fotsiny izy ireo rehefa hitany ny tena fiainana.
Afaka ny hanana fiainana tsara daholo ny olona rehetra, saingy mila ezaka izany. Diniho ireto toro lalana ireto:
IZAO NO LAZAIN’NY BAIBOLY:
“Izay tia volafotsy dia tsy ho afa-po amin’izay volafotsy ananany. Ary izay tia harena koa tsy ho afa-po amin’izay harena azony.”—Mpitoriteny 5:10.
INONA NO DIKAN’IZANY? Tsy voatery ho afa-po amin’ny fiainana ny olona, na dia manangona zavatra be dia be aza. Ny mifanohitra amin’izany aza matetika no tsapany. Hoy ny Pr. Jean Twenge, ao amin’ilay bokiny hoe Taranaka Tia Tena (anglisy): ‘Mora kivy sy miady saina kokoa ny olona, raha vola sy fananana foana no tadiaviny. Tsy hoatr’izany kosa izy, raha ny fianakaviany sy ny namany no zava-dehibe aminy. Tsy voavidim-bola mantsy ny tena fahasambarana. Tsy voatery ho afa-po amin’ny fiainana ianao, na dia mihoatra noho izay ilainao mba hivelomana aza ny karamanao.’
INONA NO AZONAO ATAO? Tadidio fa mbola misy zava-dehibe kokoa noho ny vola sy ny fananana. Zavatra tena mahasoa sy mahafa-po àry no ataovy tanjona eo amin’ny fiainana. “Mitandrema amin’izay rehetra mety ho fitsiriritana”, hoy i Jesosy, “satria na manam-be aza ny olona, dia tsy miankina amin’ny zavatra ananany ny ainy.”—Lioka 12:15.
“Ny fireharehana mialoha ny fahalavoana, ary ny fieboeboana mialoha ny fianjerana.”—Ohabolana 16:18.
INONA NO DIKAN’IZANY? Raha tia sehoseho sy mikendry zavatra ambony loatra ianao, dia tsy hanampy anao hanatratra tanjona tsara eo amin’ny fiainana izany. Hoy ilay boky hoe Tsara Noho ny Tsara (anglisy): ‘Ireo lehiben’orinasa nahavita zavatra tena niavaka, dia olona manetry tena sy mipetrapetraka ary tsy mitady ny hisongadina. Ny roa ampahatelon’ireo orinasa tsy dia nandroso kosa no vao mainka tsy nivoatra na nikatona mihitsy, satria nirehareha loatra ny lehibeny.’ Inona no azo ianarana avy amin’izany? Raha mihevi-tena ho zavatra loatra ianao, dia vao mainka hihemotra fa tsy ho tafita amin’izay ataonao.
INONA NO AZONAO ATAO? Aza mitady ny hisongadina foana, fa mba mianara manetry tena. Hoy ny Galatianina 6:3: “Raha misy mihevi-tena ho zavatra nefa tsinontsinona, dia mamita-tena izy.” Sarotra ho an’ny olona hoatr’izany ny ho afa-po amin’ny fiainana!
‘Tsy misy mahasoa ny olona mihoatra noho ny mifaly noho ny asa mafy ataony.’—Mpitoriteny 2:24.
INONA NO DIKAN’IZANY? Ho faly kokoa amin’ny asanao ianao, raha mazoto tsara sady tsy manao kitoatoa. Hoy ny Pr. Madeline Levine, ao amin’ilay boky hoe Ampianaro Tsara ny Zanakao (anglisy): “Ho afa-po amin’izay ataonao ianao, raha hainao tsara ilay izy. Mila miezaka sy manana fikirizana anefa ianao, mba hahay tsara.” Midika koa izany fa tokony hanohy foana ianao, na dia tsy mety aza ny atao indraindray.
INONA NO AZONAO ATAO? Miezaha mafy mba hampitombo ny fahaizanao, ary aza kivy na misy aza ny olana. Raha manan-janaka ianao, dia avelao izy ireo hianatra hiatrika olana (arakaraka ny taonany sy ny fahaizany avy). Aza maika hanome vahaolana, fa aleo aloha izy hiezaka. Mahatsiaro ho afa-po kokoa ny tanora rehefa vitany ny zavatra nikirizany. Mampiofana azy ho amin’ny fiainan’ny olon-dehibe koa izany.
“Aleo alika velona toy izay liona maty.”—Mpitoriteny 9:4.
INONA NO DIKAN’IZANY? Ilaina ny mandanjalanja amin’ny asa. Tokony hanana ny fiainanao koa mantsy ianao, fa tsy hoe miasa foana. Ianao ve dia ho sambatra raha mahazo fisondrotana be, nefa lasa marary na tsy mba mifandray am-po amin’ny fianakavianao? Zava-dehibe ny manao tsara ny asanao, nefa tsy tokony ho lasa an-tsirambina ny fianakavianao sy ny fahasalamanao.
INONA NO AZONAO ATAO? Karakarao ny tenanao, ary mba mialà sasatra. Maty antoka fotsiny ianao raha mamono tena miasa, ka afoinao daholo ny namanao sy ny fianakavianao ary ny fahasalamanao, nefa ianao avy eo tsy ho sambatra akory.
“Sambatra ny mahatsapa fa mila an’Andriamanitra.”—Matio 5:3.
INONA NO DIKAN’IZANY? Tena ilaina ny mianatra Baiboly sy mampihatra ny torohevitra ao, raha te ho sambatra ianao. Vavolombelon’i Jehovah an-tapitrisany no nahita fa tsy dia miady saina loatra amin’ny zavatra ilaina andavanandro izy ireo, rehefa ny fifandraisany amin’Andriamanitra no ataony zava-dehibe.—Matio 6:31-33.
INONA NO AZONAO ATAO? Mianara Baiboly satria afaka manampy anao ho afa-po amin’ny fiainana izy io. Miresaha amin’ny Vavolombelon’i Jehovah akaiky anareo, na jereo ny tranonkalanay www.jw.org, raha mila fanazavana fanampiny ianao.
‘Mba Tafita Aho Taloha Nefa Tsy Afa-po Akory’
Mpanankarena be i Timothy sy Charlotte. Nanana trano ngezabe nisy efitra maro be izy mivady. Betsaka koa ny fiarany sady tsara be daholo. Nandany vola be ry zareo rehefa nanao vakansy isan-taona. Nahagaga anefa fa nanapa-kevitra izy ireo hoe hanatsotra ny fiainany. Niova tanteraka ny fomba fisainany. Nanontany an’i Timothy momba izany ny Mifohaza!
Inona ny asanareo taloha?
Mpamoron-kira sy mpamoaka raki-kira aho, sady mpanao kaonty tamina kompania lehibe. I Charlotte indray mpiasan’ny banky, sady niasa tamin’ny toerana fitsaboana hazon-damosina. Nanokatra trano fihetezana efatra izahay tatỳ aoriana. Nandeha tsara daholo izay asa nataoko tamin’izany. Tsy voatery niasa akory aza aho, satria nanana mpiasa maro. Rehefa nandeha anefa ny fotoana, dia nanapa-kevitra izahay sy Charlotte hoe aleo tsorina ny fiainana. Namidinay àry ny ankamaroan’ny zavatra nanananay.
Tsy sambatra akory izahay. Marina aloha fa falifaly izahay isaky ny avy mividy zavatra, kanefa vetivety ihany ilay izy dia tsy mahafinaritra intsony. Mahatsiaro ho tsy afa-po izahay avy eo, sady hoatran’ny misy banga izany foana ny fiainanay.
Ka inona no nanampy anareo ho tena sambatra?
Vavolombelon’i Jehovah izahay ka nitory momba ny Baiboly foana, ary nisy fotoana aza nanokana 70 ora isam-bolana mba hampianarana Baiboly. Tsy ny fitoriana anefa no tena zava-dehibe taminay tamin’izany. Naleonay àry namidy daholo ny orinasanay, dia nankany amin’ny toerana nila mpitory betsaka kokoa izahay. Manompo ao amin’ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah eto Etazonia izao izahay. Fanompoana an’Andriamanitra no ataonay ao, ka tsy mandray karama izahay na hoe mahazo tombontsoa manokana. Tsy vola na fananana intsony no zava-dehibe aminay. Mahazo an’izay ilainay eo amin’ny fiainana izahay, dia efa ampy anay izany.
Izao ve ianao vao tena afa-po amin’ny fiainanao?
Izany mihitsy! Anarany fotsiny aho no mba hoe tafita taloha, fa tsy afa-po tamin’ny fiainako akory. Izao kosa aho tena sambatra, satria fantatro fa manampy olona eran-tany hahalala izay voalazan’ny Baiboly sy hanana fiainana tsara kokoa ny asako. *
^ feh. 35 Tsy mandray karama ny Vavolombelon’i Jehovah rehefa mampianatra Baiboly.
Mety hamitaka antsika ny fontsika, ka hitady fialan-tsiny isika mba hanaovana zavatra ratsy. Ho hitanao ato hoe inona no hanampy antsika hahafantatra izay tena ao am-pontsika.